Etu esi eri nri Gọọmet Pretzel? | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 18, 2007 Tọzdee, Ọktoba 18, 2007 Douglas Karr
Na Tuesday, m gara ifufe na Indianapolis gaa Tampa ruo Atlanta wee laghachi Indianapolis. Enweghị oge iji leta ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ (akpọghị m ka m gwa ha)… naanị nzukọ na ịlaghachi n'ikuku. Ejiri ụgbọ elu anyị Airtran o juru m anya.
Ikekwe akụkụ kachasị elu nke ụgbọ elu na-agbada na obere obere akpa m maka ịzụrụ ihe ma na-agụ ngwugwu ahụ:
Adị m ọkpọ maka mgbasa ozi mgbasa ozi ma nweta nke a!
Tags: 2011expo blogworldblogworld Los Angeleswordpress n'elu mmanya
Ọkt 19, 2007 na 8:42 AM
Ị na-egwusa m egwu! Nke a ọ bụ ngwugwu siri ike???? Ha na-achọsi ike ịre ahịa? N'ezie ọ bụ nnọọ gimmicky na n'ihu gị… na-amasị m ya….ma ekwetaghị m ya mgbe m gụrụ ya.
Ọkt 19, 2007 na 2:56 PM
Nke ahụ dị egwu. Abụkwa m onye na-aṅụ ara. M ga-eri akpa ahụ naanị b/c nke nkwakọ ngwaahịa ahụ ma pretzels anaghị amasị m.
Ọkt 20, 2007 na 1:49 PM
Ọ dị nkọ, m ga-enye ha nke ahụ, mana ndị amamihe anaghị akwụ ụgwọ. M na-eche ma ọ na-ewepụta ntinye akwụkwọ.
Air Tran nwere usoro ahịa/ụzọ ụzọ dabara adaba nke ọma, yabụ na ọ nwere ike ịbụ naanị mbọ na-agakwuru ndị ahịa, karịa mbọ ọgbọ azụmaahịa.
Ọkt 20, 2007 na 9:18 PM
Cheedị ihe tụrụ m n'anya mgbe m hụrụ post gị nwere foto nke akpa pretzels m riri ụbọchị ole na ole gara aga na ụgbọ elu si Ohio na-aga / si Orlando, Fla! Mgbasa ozi dị ịtụnanya, ọ bụghị ya?
N'ezie, post a bụ ezigbo ihe ngọpụ ka m degara gị nkọwa n'ihi na agbalịrị m iji fọm kọntaktị gị jụọ gị ihe kpatara na m nwere ike inwe nsogbu na ya na blọgụ m. Ajụrụ m ọtụtụ mmadụ ka ha jiri fọm gị zitere m ozi ule mana ọ naghị arụ ọrụ maka ihe ụfọdụ. Ọ naghị abịa na email m.
Naanị ihe m nwere ike iche bụ na email m na-etinye n'ụdị kọntaktị gị bụ otu email m na-eji na panel nchịkwa m. Nke ahụ nwere ike ịbụ ihe kpatara ya?
Ebe ọ bụ na ịzabeghị ozi m site na fọm kọntaktị gị, ana m eche ma enwere nsogbu na ya maka onye ọ bụla, gụnyere mụ onwe m na-eji ya.
Biko nye ndụmọdụ.
Ọkt 23, 2007 na 7:29 AM
Amaghị m ihe nsogbu nwere ike ịbụ. Email m site na mpempe kọntaktị m na ibe ị na-ezipụ ya. Ngwa mgbakwunye ahụ na-eji ikike mail WordPress wee na-ezipụ ozi dịka blọgụ gị ga-eme.
Ọkt 23, 2007 na 7:49 AM
Emere m dị ka ị rịọrọ wee dejupụta fọm kọntaktị gị, na-eji adreesị ozi-e m nke ọma (stephen(at)sjhopson(dot)com Agbalịrị m ịkpọtụrụ gị site na mpempe kọntaktị gị mana anụghị gị azụ. Ọ na-eme m ka m na-eche ma ọ dị. ọ nwere ihe adịghị mma na mpempe kọntaktị gị.
Dịka m dere na ozi m site na ụdị kọntaktị, mgbe ọ bụla m na-eji adreesị ozi-e ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, ndị chọrọ ịbịakwute m site na mpempe akwụkwọ kọntaktị gị na blọgụ m enwetaghị ozi ha. Ọ dịghị mgbe m natara ha.
Agbanyeghị, mgbe m gbanwere adreesị ozi-e m ka ọ bụrụ sjhopson (at) yahoo (dot) com, ozi sitere na ụdị kọntaktị gị na saịtị m bịara dị mma.
Ị chere na nke a nwere ihe ọ bụla jikọrọ ya na eziokwu ahụ bụ na a na-eji adreesị stephen (at) sjhopson (dot) com dị ka adreesị ozi-e onye nchịkwa? Nke ahụ ọ̀ nwere ihe jikọrọ ya na ya?
Ọ gbagwojuru m anya, enweghị m ike ịchọpụta ihe ọ bụ na-egbochi m iji adreesi email m bụ isi: Stephen(at)sjhopson(dot)com dị ka adreesị akwụkwọ kọntaktị gị na-eji ebugharị ozi.
Nov 23, 2009 na 6:49 ehihie
Douglas, AirTran pretzels masịrị mụ onwe m. Naanị ụzọ dị mma iji dobe ahịa, ozi ika n'ebe ahụ.